Tababar adag. Dhidid Adag.
Xarunta Beesha Barron Area
Xarunta Barron Area Community waxay siisaa fursad aad u tiro badan deegaankeena. Xarunteena waxay bixisaa tiyaatar, socod gudaha / socod socod ah, barkad dabaal oo buuxa oo gudaha ah, tubbada kulul, sawnada, qolka miisaanka, qolka jimicsiga, aagga wadnaha, qolalka labiska, jimicsi iyo inbadan!
Waxaan bixinaa fasalo jimicsi kooxeedyo kala duwan & nashaadaad xilli firaaqo oo dhalinyaro ah. Laga soo bilaabo Yoga ilaa Zumba, waxaan haynaa dhowr cashar oo lagu daboolayo baahiyahaaga.
Xarunta Beesha Barron Area, sidoo kale loo yaqaan BACC, waxay heshay Abaalmarinta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Degmada Barron. Abaalmarintan macnaheedu waa wax aad uga badan aqoonsiga xarunteena wanaagsan & shaqaalaheeda. Waa xusuusin ah inaan u hayno xarun la yaab leh bulshadeena, bulshada dartii! Dhamaanteen halkan ka ah BACC waxaan jeclaan lahayn inaan u mahad celino bulshada Barron County, xubnaheena, shaqaalaheena, iyo Gudiga Maamulka. Intaas oo dhan ka dib ma ahaan laheyn Xarunta BULSHADA AAGA Barron la'aanteed BULSHADA!
Adiga ayaan kaa go'nay!
Himilada BACC waa inay siiso dad badan intii suurtagal ah, fursado ay ku noolaadaan nolol caafimaad leh. Tan macnaheedu waa BACC waxay lashaqeysaa shirkado badan oo caymis kala duwan & ganacsiyada maxalliga ah si ay u bixiyaan xubinnimo jaban. Na weydiiso maanta si aan u ogaano sida ay u qiimo jaban yihiin xubinnimada BACC!
In jimicsiga barkadda?! Hubi jadwalka barkaddayada fasallada si aad ugu habboonaato baahiyahaaga ama xilliyada dabbaasha furan.
Fasallo Bilaash ah
Ma dooneysaa fasal aad ku biiri karto wakhti kasta? Fiiri mid ka mid ah casharadan.
Dadka Waaweyn Re.
Diyaar ma u tahay inaad naftaada la tartanto? Fiiri mid ka mid ah casharadan dadka waaweyn! Loogu talagalay in ay jebiso dhidid halka toning.
Ma waxaad raadineysaa xoogaa hagitaan 1: 1 ah? Aan kugula xariirno 1 ka mid ah Tababarayaasheena Shakhsiyeed.
Isniinta-Jimce: 5:30 AM ilaa 9 PM
Sabtida: 8 AM ilaa 7 PM
Axad: 1 PM ilaa 6 PM